Duur xulka Kim Jong-un ee Maraykanka - BBC News Somali
Duur xulka Kim Jong-un ee Maraykanka
17 Maajo 2018
Image caption Labada nin waxay kulmi doonaan 12 June
Kuuriyada Woqooyi waxa ay doonayso way caddaynaysaa. Waa mid aanay xoogga ku saarayn dhoolla tusyada milatari, laakiin ujeedadeedu tahay waraysiyada Axaddii [ka baxay Telefsihanada Maraykanka] ee John Bolton, oo ah la taliyaha Madaxweyne Trump ee nabad gelyada qaranka, iyo Mike Pompeo oo ah wasiirka arimaha dibaddu, ay ku qeexeen waxa Kim Jong-un ka heli karo [Maraykanka] hadii uu faraha ka qaado hubkiisa nukliyeerka.
Kuuriyada Woqooyi arintaa isha ayey ku haysay, ma ay jeclaysay wararka ay ka helayso. Sababta dalku sanado badan ugu foognaa samaysashada saanadda nukliyeerka, ee kharashka badan ugu bixiyay waxay ahayd difaaca jiritaankiisa.
Markaa, in nukliyeerka oo laga tirtiro Kuuriyada Woqooyi lagu dhereriyo Liibiya, waa sida uu Bolton Axaddii yidhiye, waa mid aan ka degayn dalkaas. Sababta oo ah nidaamkii Liibiya wuu burburay hogaamiyihiisiina ma nabad gelin.
Hayeeshee, dhibaatada badankeeda waxa u sal ah afka iyo turjumidda.
Mudo bilo ah ayaa dunidu waxay maqlaysay in Kuuriyada Woqooyi u heelantahay in ay tirtirto nukliyeerkeeda, laakiin dad badan oo arimahaa ka faalooda oo Kuuriyada Koonfureed joogaa way la yaabeen. Waxaanay farta ku fiiqeen in midhkaasiba yahay ka ay isku seeggan yihiin Maraykanka iyo Kuuriyada Woqooyi.
Maraykanku waxa uu doonayaa in Kuuriyada Woqooyi joojiso samaysiga hubka nukliyeerka wakhti cayiman oo marka ay tallaabadaa qaado uun la siiyo abaal marin dhaqaale. Waxaanu sidoo kale doonayaa in arrintaa si dhakhso ah loo hirgeliyo oo qiyaastii sanado gudahood lagu fuliyo.
Kuuriyada Woqooyi iyada erayga baabi'inta nukliyeerku macne kale ayuu u leeyahay oo marka ay artintan ka hadlayso waxa ay sheegtaa in ujeedsdu tahay in jasiirad la moodka oo dhan laga dhigo meel nukliyeerka ka caaggan.
Taasi waxay ka dhigantahay in Maraykanka laftiisuna uu sidoo kale yeelo, oo dhimo tirada ciidamada ah ee ka jooga Kuuriyada Koonfureed ama sidoo kale uu meesha ka qaado nukliyeerka uu gobolka u dhigay difaaca. Markaa hadii Kuuriyada Woqooyi laga doonayo in ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka waa in sidoo kale la siiyaa dammaanad nabad gelyo.
Go Myon-Hyun oo ka tirsan mac-hadka daraaskaadka Asan ayey la tahay marka laga hadlayo wada xaajoodka siyaasadda juquraafiyadeed ee dunida in Donald Trump "kama dambaystii helay dhiggiisii".
Waxaanu isaga oo hadalka sii wada yidhi "waxaad moodaa in Maraykanku kolba la imanayey dalabaad adag oo dheeraad ah oo Kuuriyada Woqooyi aanay la dhacsanayn. Waxaanay leedahay hadii aad dalabaad dheerad ah oo aan noo cuntamayn keentaan, waxaa naga go'an in aanu wada xaajoodka ka hulleello".
Waxa jira, hadaba, calaamado muujinaya in si uun heshiis loo gaadhi karo.
John Delury oo ah bare sare oo taariikhda ka dhiga Jaamacadda Yonsei, ayaan se isagu rajo dhigin. Waxa uu is mari waagan ku tilmaamay "turunturro" laakiin wuxu rumaysanyahay in xaaladda lagu furdaamin karo hadal suuban oo la adeegsado.
"Kuuriyada Woqooyi ma ay sheegin in ay faraha ka qaadayso nukliyeerkeeda. Waxay tidhi ma doonayo in aan nukliyeerka tirtiro iyadoo dhafoorka qori la igaga hayo. Hubka lagaga hakanayo iyadoon waxba ku bedelan ayaar dhiibi mayso. Waxay tidhi waa in ay talaabadu noqoto mid wax is weydaarsi ah oo hadii aan wax kuu ogolaado adna aad wax ii ogolaataa sidayda oo kale" ayuu yidhi John Delury.
Hadalkaasi waa mid digniin u ah maamulka Trump.
Trump oo loo dabaal joogtaynayo
Sida uu tilmaamayo Go Myong-Hyon, way muuqataa in Kuuriyada Woqooyi ka warqabto sida Madaxweyne Trump doonayo in shir madaxeedkani u dhaco, oo waxa uu yidhi "wuxu dhawr todobaad isku taxalujinayey sidii uu u yeelan lahaa libta wixii togan ee ka soo baxa. Kuuriyada Woqooyi na way garawsatay in faa'iidada siyaasadeed ee Madaxweyne Trump filanayaa arrintaa salka ku hayso. Si kale oo loo dhigi karaana waxa weeyi in arrintani qudhiisa dabin ku noqotay. Hadii Madaxweyne Trump joojin waayo dalabaadka badan ee uu ka doonayo dhinca kale oo aanu waxba u ogolaan waxa dhici doonta in uu ku khasaaro kulankaa".
Arinta ah "sheegashada libta" ayaa sida oo kale ka cadhaysiisay Pyongyang. Waxa soo baxay astaamo muujinaya arintaas markii uu wasiirka arimaha dibadda Maraykanku booshaqadii u dambaysay ku tagay magaalo madaxda Kuuriyada Woqooyi.
Mar loo saro kacay farxad oo koobabka la isku garaacayey, ayaa sarkaal sare inta uu ku jeedsaday Mike Pompeo waxa uu xasuusiyey in kulankaasi inuu dhacaa aanu ku iman istaraarijiyadda maamulka Trump ee ah cadaadiska badan ama cunoqabataynaha.
Kuuriyada Woqooyi waxay doonaysaa in dunidu ogaato in qudheedu ay soo fadhiisanayo miiska wada xaajoodka iyada oo aan la muquunin. Waxa sidoo kale dhici karta in ay dareensantahay in ay [iyadoo sidaa qallafsan] hadana tanaasulaad badan bixinayso.
Image caption Siidaynta saddexda qof ee Maraykanka ahi waxay ahayd tanaasul weyn oo Kuuriyada Woqooyi samaysay
Waxay joojisay dhamaan tijaabooyinkii gantaalaha waxaanay sii daysay saddex qof oo Maraykan ah oo u xidhnaa. Kim Jong-un waxa uu la kulmy Madaxweyne Moon, labadooduna waxay saxeexeen baaq wada jir ah, waxaana la filayaa in ay si wada jir ah warbaahinta caalamka horteeda ugu burburiyaan goob nukliyeerka lagu tijaabin jiray.
Markaa in la maqlo in maamulka Trump sheegto libta heshiis aanu jeclayni waxa ay noqonaysaa mid aan la suuraysan karin.
Dad badan ayaa odhan kara arintani waa mid ay Pyongyang soo qorshaysay. Maadaama oo ay Kuuriyada Woqooyi taariikhda u gashay in ay ka baxdo heshiisyada wada xaajoodyadana ka baxdo. Waana arin dhacda e. Waxa sidoo kale Kuuriyada Woqooyi khibrad u leedahay diblomaasiyadda noocan oo kale ah oo aanu lahayn maamulka haatan ee Maraykanku.
Dunida oo u riyaaqday go'aanka Kuuriyada Woqooyi
Kuuriyada Waqooyi oo hakineysa tijaabooyinka gantaallada iyo nukliyeerka
Waxyaabaha soo baxayaa waxa ay fursad siinayaan dadka arinkan ka shikisan fursad ay ku sheegaan in haatan aanay waxba ka duwanayn wakhtiyadii hore oo aanay noqonayn sida dad badani rajaynayaan. Iyo in sida oo kale wixii oo dhoolla cadayn iyo is gacan qaad ahaa iyo socodkii debacsanaa ee uu dhirta dhexdeeda la tamashleynayey Madaxweyne Moon, in aanay bedelayn ee uu Kim Jong-un yahay uun nin aan la aamini karin.
Arintaasi waxa ay talaabooyinka dambe ee la qaadi karo ka dhigaysa kuwo aad u adag. Waana in Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanku ay go'aan ka gaadhaan sida ay uga falcelinayaan arimaha taagan.
Ma soo debci doonaan hadba oo way tanaasuli? Ma dhici kartaa in ay yareeyaan dhoolla tusyada milatari? Mise way is adkayn doonaan oo waxay rajo ka qabaan in Kim Jong-un sidooda oo kale doonayo in shirmadaxeedka uu la yeelanayo madaxweynaha Maraykanku noqdo mid lagu furdaamiyo ismari waaga taagan?
Kuuriyada Woqooyi oo aqbashay shardi Maraykanku ku xidhay
Kuuriyada Koonfureed oo ergo u direysa Kuuriyada Woqooyi
Ciidammada Maraykanka oon dhayil ku dhaafi doonin ciidda Kuuriyada Koonfureed